Ungasebenza kanjani e-Amazon | Ukwakheka nezifundo
UMaria Jose Roldan | 11/06/2021 12:00 | Ukuphuma Komsebenzi
I-Amazon akungabazeki ukuthi ingenye yezinkampani ezibaluleke kakhulu emhlabeni. Ngekhasi lalo izigidi zabantu zithenga zonke izinhlobo zonke izinsuku, zenza inzuzo engenakuqhathaniswa yaleyo nkampani. Konke lokhu bekungeke kwenzeke ngaphandle kwabasebenzi abakhulu abanalesi sikhondlakhondla sebhizinisi.
Indlunkulu enkulu isesifundazweni saseSeattle futhi namuhla kuyaqabukela umuntu ongazange enze uhlobo oluthile lokuthenga nge-Amazon. Abantu abaningi bacabanga ukuthi cishe akunakwenzeka ukuba yingxenye yabasebenzi abakhulu abakha inkampani enjalo, Kodwa-ke, i-Amazon ihlala ihamba futhi ifaka abasebenzi abasha kubasebenzi bayo.
Esihlokweni esilandelayo sizokutshela ukuthi ungaba kanjani yingxenye ye-Amazon futhi yiziphi izidingo okufanele kuhlangatshezwane nazo.
1 Kusho ukuthini ukusebenza e-Amazon
2 Ungasebenza kanjani e-Amazon?
Kusho ukuthini ukusebenza e-Amazon
Uma kukhulunywa ngokuhlaziya okunikezwayo kwemisebenzi ehlukile e-Amazon, kufanele kuqashelwe ukuthi kuningi ngaphezu kokuhluka kakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi inethiwekhi yezinhlelo zokusebenza ibanzi impela, ukuthola indlunkulu kwasakazeka kuyo yonke indawo yaseSpain.
Mayelana neholo labasebenzi, kufanele kuthiwe lingelinye eliphakeme kakhulu emkhakheni. Ngaphandle komholo oyisisekelo, abasebenzi bavame ukuthola umholo owengeziwe ongafana nohlelo lwempesheni. Ngaphandle kwalokhu, inkampani ithwala zonke izindleko uma kwenzeka abasebenzi befuna ukuqeqesha okuningi ukuze bakhushulelwe ngaphakathi kwabasebenzi.
Into enhle futhi enhle ngokujoyina le nkampani iqiniso lokuthi ezentengiselwano ze-elekthronikhi ziyaqhubeka zikhula futhi zikhula njalo nsuku zonke. Ngakho-ke, i-Amazon inkampani eshiye ingqondo kahle isikhashana futhi iminyaka eminingi. Ngakho-ke, ukusebenza kule nkampani ukuthola umsebenzi esikhathini esimaphakathi nesikhathi eside, into ebaluleke kakhulu eminyakeni esiyigijimayo.
Ungasebenza kanjani e-Amazon?
Uma unesifiso sokuba yingxenye yale nkampani enkulu, kufanele ufake ikhasi layo elisemthethweni. Lapho ungathola ukunikezwa kwemisebenzi nezikhala ezintsha zazo zonke izinhlobo. Into ejwayelekile ukuthi izinkampani zangaphandle ziphethe ukwenza ukhetho lwabasebenzi abasha abazongena kubasebenzi baseAmazon. Mayelana nezidingo ezifunwayo yilokhu okulandelayo:
Imvume yokusebenza esemthethweni kanye hlala ezweni lapho kunikezwa khona isikhala.
Ubungoti bolimi okukhulunywa ngalo futhi kuya ngokuthi umsebenzi wenziwa kuphi.
Eminye imisebenzi idinga ilayisense yokushayela kanye nokuba nemoto.
Eubuncane beminyaka eyi-18.
Isifiso sokufunda futhi isimo sengqondo esihle.
Amandla okusebenza ezindaweni eziphakeme, ikakhulukazi uma ukunikezwa komsebenzi kubhekisa esicini se-logistics. Kulezi zimo kuyadingeka futhi ukuthi umuntu akwazi ukuphatha imithwalo engaphezu kwamakhilo ayi-10 ngaphandle kwenkinga.
Kuyadingeka kaningi njengenye yezidingo, ukuthi umuntu akanankinga uma kuziwa ekusebenzeni ebusuku.
Mayelana nomholo noma lokho okukhokhiswa ngumsebenzi wase-Amazon, kufanele kuboniswe ukuthi umholo uzohluka ngokuya ngomsebenzi lowo muntu onawo. Endabeni yokulethwa kwamadoda, kulinganiselwa ukuthi bakhokhisa cishe i-1.200 euros ngenyanga. Endabeni yokusebenza kwe-logistics noma endaweni yokugcina impahla, umholo ufinyelela kuma-euro ayi-1.600 ngenyanga. Ngale ndlela, umholo wonyaka womuntu oletha i-Amazon ngama-euro ayi-10.000 ngonyaka futhi esimweni sesibambi sokugcina impahla, umholo uba ngu-20.000 XNUMX euros ngonyaka.
Ekugcineni, iAmazon yinkampani ekhula ngokuqhubekayo edala imisebenzi eminingi unyaka wonke. Kuyacaca ukuthi sibhekene nenye yezinkampani ezibaluleke kakhulu emhlabeni. Njengoba ubonile, izidingo zokungena kubasebenzi azifuneki kakhulu. Uma unentshisekelo, kufanele nje ufake iwebhusayithi ye-Amazon bese ubheka imisebenzi ehlukile oyinikezwayo. Ukusuka lapho, umuntu angasesha ngendawo yomsebenzi noma ngesikhundla asinikezayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukwakheka nezifundo » Izifundo » Ukuphuma Komsebenzi » Ungasebenza kanjani e-Amazon
Ungaba kanjani umthengisi wezezakhiwo: amathiphu ama-5 awusizo